Militeriga Kenya oo howlgalo Qabqabasho dad Somali ah ka sameeyay Mandheere. – SBC
Militeriga Kenya oo howlgalo Qabqabasho dad Somali ah ka sameeyay Mandheere.
Ciidamada Dowlada Kenya ayaa howlgalo ay dad ko qabqabteen ka sameeyay saaka gudaha degmada Mandheere ee gobolka Waqooyi bari Kenya.
Howlgaladan ayaa Ciidamada Dowlada Kenya waxay ku abaarayeen dadka soomaalida ah ee ka talaabaya xadka kala qeybiya Mandheera iyo Baladxaawo .
Qabqabashadani ayaa timid ka dib markii isla saaka ay dowlada Kenya Fasaxday xadka, lamana yaqaan ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa,
Mar aynu isku daynay in aan xiriiro la sameyno saraakiisha police-ka ee Kenya ayaa ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arinkan isaga ah,
Mid ka mid ah wariye yaasha Madaxa banan ee ku sugan Mandheera ayaa Warqabadka SBC ee gobolka Gedo u xaqiijiyay in howlahan la dareemay Habeenimadii xalay gelinkii dambe, ilaa iyo haatana aaan la ogeyn waxa ka dambeeya.
Waxa uu wariyuhu intaasi ku daray in howlgaladaasi ciidamada Kenya ay xabsiga ku dhigeen dad aan tiro koob laheyn oo u badan dadka soomaalida ah ee doonayay in ay xadka gudbaan kuwaas oo u badan kuwo barakacayaal ah.
Inkastoo sida wararka lagu helayo ay weli soconayaan howlgalada Ciidamada Kenya ay ku qab qabanayaan dadka ayaa hadana waxaa jira wararka sheegaya jiritaanka kulamo u dhexeeya Maamulka DKMG ah ee Baladxaawo iyo weliba saraakiisha ciidamada Kenya kaas oo ka soconaya gudaha Degmada Mandheera.
Sikastaba ha ahaatee howlgaladan ayaa ay dadka qaar u aaneynayaan in ay ka dambeeyaan fal qarax ah oo maalin ka hor ka dhacay deegaan ku dhow xadka kala qeybiya Wadamada Kenya iyo Soomaaliya kaas oo lala eegtay laba qof oo dalxiisayaal ah oo mid ka mid ah ay qafaasheen shufto aan la aqoon .